Asikwazi ukugwema amachaphazelo empi yeRussia ne-Ukraine, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Asikwazi ukugwema amachaphazelo empi yeRussia ne-Ukraine, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngifisa sibheke ukuthi imiphumela yempi ephakathi kweRussia ne-Ukraine yenzani emnothweni, ikakhulukazi waseNingizimu Afrika.
Yebo, asibona abahlaziyi bepolitiki kodwa iqiniso wukuthi sesifike esigabeni lapho singamazwe omhlaba sesimunye ekwenzeni izinto eziningi nokuxhumana kangangokuthi noma yini eyenzeka emhlabeni iba nomphumela kwamanye amazwe.
Ake sithathe impi ephakathi kweRussia ne-Ukraine. Isithinta kanjani thina siyiNingizimu Afrika? Akukapheli zinsuku ezingaki sesiyabona ukuthi le mpi isifaka ingcindezi emnothweni wethu. Sekuyabonakala ukunyuka kwamanani okudla, ikakhulukazi amafutha okupheka nezinye izinto. Siyabona futhi kwenyuka inani likaphethroli nopharafini, izinto esizisebenzisa kakhulu ezweni.
Uma kunyuka inani likaphethroli kusho ukuthi kuzokwenyuka inani lokuhambisa izimpahla umhlaba wonke, kungabe zihanjiswa ngamaloli, amabhanoyi noma ngemikhumbi kuyafana uma kunyuka nje uphethroli nentengo yokudla iyanyuka.
Kwenzeka kanjani na? Phela abathutha impahla abafuni kube yibona kuphela abathwala izindleko zokunyuka kukaphethroli, kufanele bazidlulisele kubakhiqizi. Kanti nabo abakhiqizi ngeke bavume ukuthi ukunyuka kukaphethroli bakuthwale, ngakho nabo into abayenzayo wukudlulisela lezo zindleko kubathengi.
Yingakho-ke sesibona inani lezinto linyuka ngapha nangapha. Ake sithathe nje umama odayisa amagwinya. Loku kusho ukuthi inani lamagwinya selizonyuka ngenxa yokuthi inani lamafutha selinyukile ngoba phela i-Ukraine yaziwa kakhulu ngokutshala ubhekilanga. Yilapho-ke sithola khona amafutha okupheka.
Kusho ukuthini loku futhi? Kusho ukuthi singabona namanani okudla nawezindawo zokudla ekhuphuka ngoba amafutha asetshenziswa kakhulu kuleyo mboni. Kunezinye izindawo engingazibalile okusobala ukuthi nazo inani lezinto lizonyuka.
Yebo, singayithatha kancane impi phakathi kweRussia ne-Ukraine, sithi ayisithinti kangako kanti sishaye phansi. Uma kuliwa le ko-Ukraine, thina sithelwa ngamachaphazelo.
Akusiwo uphethroli kuphela kepha namafutha nezinye izinto iRussia ne-Ukraine ehamba phambili ngazo. Kunebhizinisi esiphezu kokulisingula sinezinye izinsizwa nodadewethu lezobuchwephese. Eziningi zezinto besisizwa yinkampani emandla ngezobuchwepheshe yase -Ukraine. Kuthe uma sekuqala impi neRussia kwavele kwanqamuka olayini. Sizithole sesingakwazi manje ukuxhumana nabo ngendlela ebesijwayele ngayo nonjiniyela babo. Maningi ama-system developer e-Ukraine okumanje awasakwazi ukusebenza ngokukhululeka njengakuqala ngoba nansi impi isemabaleni.
Ngizama ukuthi asisekho isikhathi sokuthatha kancane izinto ezenzeka emazweni akude sithi hhayi loku ngeke kusiphazamise ngoba sikubona kwithelevishini. Buka nje ukuqala kweCOVID-19 lena eWuhan, eChina, kwenza umonakalo ongakanani. Kwakuyinto esasiyibukela le kude kanti asazi ukuthi izomosha izinto eziningi kangaka umhlaba wonke. Buka manje sisenkingeni ngezinto eziningi ezimayelana nomnotho womhlaba namazwe ngenxa yegciwane elaqala ukubonakala eChina.
Loku kusho ukuthi noma ngabe siyathanda noma asithandi kuyaphoqa ukuthi siqaphele ukuthi izinto esizenzayo eNingizimu Afrika azibi nawo yini umphumela omubi kwamanye amazwe.
Uma ukhumbula ukuthi njalo uma lapha eNingizimu Africa kusuka izibhelu zokucwasana ngokobuzwe siye sibe nenkinga yokuthi imithwalo okufanele isuke lapha eNingizimu Afrika iye kwamanye amazwe ase-Afrika iyaphazamiseka ngaleso senzo noma mhlawumbe uma kunamabhizinisi aseNingizimu Afrika akwamanye amazwe acekelwa phansi.
Ngakho kumele siqaphele ukuthi manje sesimhlaba munye, asisakwazi nje ukuthula sibukele izinto zenzeka kwamanye amazwe singafaki isandla noma sikhuze lapho sikwazi ukukhuza khona. Uma sithula singasho lutho, ayasithela amachaphazelo sithanda singathandi.
UBiyela uwumeluleki wamabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting
Facebook: Ntokozo Mondli Biyela
Akaziboni eshiya ukufuya oqale ngezinkukhu ukuze angabi wumthwalo kubo. Usebheke ukufuya izimbuzi nokungena kwezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
U-Michael Spicer uyibekile induku ebandla, kuloba uBusi Mavuso